Ny tatitra momba ny hetsika, fitaovana ilaina hanambarana ny asanao.
Posted by Tranquillus | Apr 11, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Nikasa ny hangataka bonus ianao, fiofanana na fitomboan'ny karama. Alohan'ny hanaovana hetsika, manaova izay rehetra ilaina mba hisarihana ny asanao. Raha manao roa heny ho an'ny hafa ianao, nefa tsy misy mahalala azy io. Mandany ny andronao ianao, tokony hieritreritra ny hanoratra tatitra isan'andro.
Inona ny tatitra momba ny hetsika isan'andro?
Mandritra ny fepetra famonoana dia mety tsy hifandray mivantana amin'ny hiarkarchy anao ianao. Mety terena hanolo fotsiny ny mpiara-miasa aminao na ny mpanara-maso anao ianao. Ny fanoratana tatitra momba ny asa isan'andro dia hanome sary mazava ny asanao. Ny olona tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso dia azonao ampiasaina io antontan-taratasy io handraisana ny fanapahan-keviny. Hanamora ny asanao rehetra ny fikarakarana ny asanao. Raha fantatry ny tompon'andraikitra anao hoe inona marina no ataonao sy tadiavinao hatao. Mety hisy hieritreritra hoe tsy hanelingelina anao loatra ireo hafatra ireo na ny antso an-tariby.
Inona no fampidirana tokony hampidirina amin'ny tatitra momba ny hetsika?
Voakasik'izany ny mitondra ireo singa ilaina rehetra, ny fampahalalana rehetra ahafahanao manana fijery feno momba ireo asa atao mandritra ny andro. Asa vita, vita ny asa, voavaha olana ary koa ireo vahaolana. Hanampy anao izy, toy ny olona rehetra voakasik'ilay fihetsikao, handeha amin'ny lalana tsara. Fantatry ny rehetra ny zava-misy ary rehefa hitranga, tsy mihetsika tsy sasatra isika. Raha arahinao tsara ianao, dia miarahaba anao izahay ary raha diso ianao dia hilaza aminao haingana izahay. Tsy hisy hisy hitondra ny asanao. Ity tahirin-kevitra ity dia mety ho toy ny fototry ny dinidinika isan-taona, ohatra.
HAMAKY Lisitra misy bala ary mora vakiana
Ohatra amin'ny tatitra isan'andro isa 1
Amin'ity ohatra voalohany ity dia misy mpitarika ny ekipa iray mampandre ny mpanara-maso azy ny zava-misy any am-piasana. Izy tenany mihitsy no tafahitsoka ao an-trano mandritra ny 15 andro. Isan'andro dia mandefa azy izy mailaka rehefa mifarana ny andro. Ho valin'izay, ny mpitarika azy dia nilaza taminy ny hadisoana hialana ary ny vahaolana mahomby indrindra hamahana ireo olana sasany.
Lohahevitra: tatitra momba ny hetsika tamin'ny 15/04/2020
Fitaovana sy fanaraha-maso ny famoronana entana
Fitantanana ny fandaharam-potoana
Fandalovana isaky ny tranokala hijerena ny fanarahana ny fepetra covid19
Ny fitantanana ny zava-nitranga ny serivisy
Ny fitantanana mail sy ny antso an-tariby
Asa mitohy hatrany
Fiofanana sy fanombanana ny mpiasa vaovao
Fikojakojana ny trano sy fitaovana fanadiovana
Manomana lalana vaovao sy fikarakarana carpooling
Famolavolana tolo-kevitra vaovao ho an'ny mpanjifa fanodinana
Fifandraisana amin'ny tsy fahaiza-mitantana amin'ny fitantanana
Ampahatsiahivo ireo fitsipika rehetra momba ny fiarovana sy ny fahadiovana
Fanamarihana ny baikon'ny vokatra sy ny baiko vaovao raha ilaina
Fandefasana singa mandoa
Fikojakojana ny fikojakojana fiara sy fanariana fako ataon'ny ekipa 2
Fihaonana amin'ireo mpitarika telo ao amin'ny ekipa
Ohatra amin'ny tatitra isan'andro isa 2
Amin'ity ohatra faharoa ity, i Fabrice, lehilahy mpanaterana avy any amin'ny faritr'i Paris, dia mandefa tatitra isan'andro ao amin'ny chef vaovao. Andrasana ny handefa an'io tatitra io mandritra ny roa andro. Amin'ny faran'ity vanim-potoana ity dia hisy adihevitra vaovao eo anelanelan'izy ireo mba hamaritana ny iraka vaovao nataony. Ary manantena ny fanohanan'ny mpitarika vaovao azy ho bonus.
HAMAKY Hatsarao ny fomba fanoratanao: mpampifandray lozika
Fikojakojana kamiao: fanaraha-maso, fanerena pne, fanovana solika
Fivorian'ny fampahalalana momba ny fahasalamana COVID19
Fandaminana ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana
Fiaingana amin'ny trano fanatobiana entana amin'ny 9 ora sy sasany maraina
Fandefasana fonosana any an-tranon'ny mpanjifa: fanaterana 15
Miverina any amin'ny trano fanatobiana entana amin'ny 17 hariva.
Ny fitahirizana ireo fonosana tsy voarakitra sy ny fandefasana ireo naoty momba ny fitaterana any amin'ny birao
fanodinana ny fitarainan'ny mpanjifa, nolavina na entana simba
Fitaovana fanadiovana sy fanadiovana miaraka amin'ny ekipa sisa
Ohatra amin'ny tatitra isan'andro isa 3
Amin'ity ohatra farany ity, ny mpanamboatra solosaina iray dia nampandre ny lehibeny amin'ny fanaony isan'andro. Amin'ny famaritana ny asa natao tao an-trano sy ny nataon'ny mpanjifa. Tsy misy olana manokana, mitohy ny diany ny asa na dia eo aza ny fotoana voatokana.
9:30 maraina - 10:30 maraina trano
Resadresaka nifanaovana tamin'i Guillaume hahalalanao bebe kokoa ny vahaolana hatolotray ny orinasa XXXXXXXX.
Fandrafitra sy famindrana amin'ny serivisy mpanjifa ny tombatombana voalohany amin'ny antsipiriany.
10:30 maraina - 11:30 ato an-trano
Famoronana antontan-taratasy ho an'ny fanofanana mpiasa tsy maharitra.
11:30 maraina - 13:00 tolakandro TRAVEL
Ny fanamafisana tambajotra sy ny fiarovana ho an'ny orinasa XXXXXXXXXX.
Fametrahana ny rindrambaiko telecommuting.
14:18 hariva - 00:XNUMX hariva trano
Fanamboarana ny mpanjifa 12 tsirairay.
Famindrana antso ho an'ny fitsabahana amin'ny tranokala.
Ny tatitra momba ny hetsika, fitaovana ilaina hanambarana ny asanao. 25 aprily 2020Tranquillus
Teo alohaMianara finaritra amin'ny sehatra e-fianarana ety amin'ny SKILLEOS
manarakaFampivoarana mahomby tsara indrindra ho an'ny mailaka
Ohatra ny mailaka hangataka fialan-tsasatra raha tsy misy karama.
Taratasy taratasy hitakiana ny fandoavana ny karamanao tsy voaloa
Ahoana no hambolena ny herim-po azo antoka?